डा. केसीलाई योगेशको जवाफः तपाईले आफ्नै स्तर स्खलित गर्नुभयो – mYKantipur.Com
डा. केसीलाई योगेशको जवाफः तपाईले आफ्नै स्तर स्खलित गर्नुभयो
२३ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले आफूलगायतका सांसद’bout डा. गोविन्द केसीले गरेको टिप्पणीमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । डा. केसीले आफ्नै स्तर स्खलित गरेको भट्टराईको टिप्पणी छ ।
आफूसँग भएका सहमति विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेपछि डा. केसी आक्रोसित भएका छन् । उनले भट्टराईसहित नेकपाका केही सांसदको नाम लिएर जनतामारा भएको र माफियालाई पोसेको आरोप लगाएका थिए ।
सोमबार नै बसेको शिक्षा समितिको बैठकमा भट्टराईले डा. केसीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘उहाँले सभापति, माननीय खगराज अधिकारी, भैरवबहादुर सिंह र मेरो पनि नाम लिएर जे शब्दबाट हामीलाई टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँलाई कुनै जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छैन’ भट्टराईले भने, ‘गोविन्द केसीजीले यो बुझिरहनुस्, हामीमाथि जुन शब्दहरु जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो । यो शब्दले उहाँलाई जिन्दगीभर लखेट्छ । पछिसम्म गिज्याउँछ र यो शब्दको भारीले उहाँको टाउको थिचिरहन्छ ।’
भट्टराईले अघि भने, ‘प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड’bout जे शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो स्तर स्खलित गर्नुभएको छ । यसरी प्रतिवादमा उत्रनु राम्रो होइन ।’
आफ्ना शब्दहरुलाई सही ढंगले प्रयोग गर्दा डा. केसीको पनि इज्जत हुने भट्टराईले बताए । डा. केसीको व्यक्तिगत इमान्दारितामा प्रश्न गर्न नचाहेको भन्दै उनले सानातिना कुरामा हात हालेर आफ्नो प्रतिष्ठा नगुमाउन सुझावसमेत दिए ।
डा. केसीसँग सरकार गरेको सम्झौतामा समेत संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको भट्टराईले स्मरण गराएका छन् ।
बन्यो गाउँपालिकाको आफ्नै भवन
भक्तपुरका मेयरको नारा : मागेर विकास हुन्न, आईएनजीओ चाहिएन